कतै कुर्सीमा बस्दा यी गल्ती त गर्नु भएकाे छैन ? - Purbeli News
कतै कुर्सीमा बस्दा यी गल्ती त गर्नु भएकाे छैन ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १०, २०७९ समय: ६:५१:४९
करियर वा जागिरसँग सम्बन्धित मामिलामा वास्तुशास्त्रलाई ध्यान दिएन भने नराम्रो परिणाम आउन सक्छ। करियरमा सफलता र रोजगारीमा शुभ अवसर प्राप्त हुने धेरै स्रोतहरू वास्तुमा बताइन्छ। वास्तु प्राचीन सभ्यताको एक यस्तो विज्ञान हो जसले प्रकृतिका विभिन्न तत्वहरूलाई सन्तुलनमा राखेर हाम्रो जीवनलाई सुधार्ने काम गर्छ। करियरमा छिटो प्रगति गर्न वास्तुमा उल्लेख गरिएका उपायहरु के के छन् जानौँ ।
१, ल्यापटप वा स्मार्टफोन जस्ता इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू प्रयोग गर्दा, तपाईंले दिशा निर्देशनहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। वास्तुका अनुसार इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू दक्षिण–पूर्व दिशामा राख्नु करियर वृद्धिको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। तार वा केबुलहरू टेबुलमा अलपत्र वा अव्यवस्थित रूपमा नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्
२, यदि तपाईं पनि कामको समयमा कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु हुन्छ भने आफ्नो यो बानी तुरुन्तै बदल्नुहोस्। यसले करियरमा प्रगतिमा बाधा पु¥याउँछ । अफिसमा अग्लो कुर्सीमा बस्नु करियरको लागि धेरै राम्रो हो। यो नियम घरबाट काम गर्नेहरूलाई पनि समान रूपमा लागू हुन्छ।
३, लकडाउनपछि घर अफिस बनाएकाहरूले पनि केही कुरालाई राम्ररी ख्याल गर्नुपर्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कार्यस्थल बेडरूमको छेउमा छैन। कामको लागि आयताकार वा वर्गाकार डेस्क मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। गोलो टेबल वा गोलाकार डेस्कमा काम नगर्नुहोस्।
४, शक्तिशाली क्रिस्टलहरू प्रयोग गरेर, ऊर्जा स्तर बढ्छ र कार्य क्षमता बढ्छ। अफिसको डेस्कमा क्वार्ट्ज क्रिस्टल राख्नाले राम्रो अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्छ। यसका अलावा मेजमा बाँसको बोट राख्नु पनि करियरको लागि धेरै शुभ मानिन्छ।
५, वास्तुका अनुसार सुत्दा पूर्व दिशामा टाउको राख्नु पनि करियरको लागि राम्रो हुन्छ। यसले एकाग्रता मात्र बढाउँदैन, मानसिक ऊर्जाको पनि विकास गर्छ। मानिसहरूले सधैं उत्तर दिशामा बसेर काम गर्नुपर्छ। काम गर्दा पछाडि बलियो पर्खाल हुनुपर्छ। पछाडीको भित्तामा कुनै झ्याल छैन भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।